လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး သုတေသန - Eden Centre for Disabled Children
+ 95 1 640 399 [email protected]
အစီအစဉ် နှင့် စီမံကိန်းများ
မသန်စွမ်းသက်ငယ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် မိဘပံ့ပိုမှု။
အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်၊ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာ၀န်နှင့် တန်ဖိုးထားသောအချက်များ
အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များ၊ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များနှင့် တန်ဖိုးထားသောအချက်များ
လူမှုရေးရှုထောင့်ဖြင့် မသန်စွမ်းမှုကိုရှုမြင်ခြင်း (မသန်စွမ်းမှုအမြင်သစ်)
မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ မသန်စွမ်းကလေးများနှင့် လူတိုင်းအကျံုးဝင် ပညာရေး (ဧဒင်မသန်စွမ်း သက်ငယ်များပြုစုရာ ရိပ်မြံုမှ vso နှင့် ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့သော သုတေသန အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၅ မတ်လတွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။)
သုတေသနသည် လူတိုင်းအကျံုးဝင် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သော ပထမ ဦးဆုံး သုတေသနဖြစ်ပါသည်။
ဤလူတိုင်းအကျံုးဝင်ပညာရေးသည် အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် သင်ယူမှုတွင် အခက် အခဲမျိုးစုံ ရင်ဆိုင်ကြံုတွေ့နေရသော သူများဧ။် ပညာသင်ယူခွင့်ကို ဖြည့်စည်း ပေးရန် ကြိုးစား နေသည့် အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးတိုင်း ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိခံစား စေနိုင်ရန်နှင့် ကလေးအားလုံး အထွေထွေပညာရေးကိုသင်ပေးနေ သည့်ကျောင်းတိုင်းတွင် မသန်စွမ်း ကလေးများ အပါအဝင် ကလေးတိုင်း တန်းတူ ပညာသင်ယူ နိုင်ရေးသည် အခြေခံ လူ့အခွင့် အရေး ဖြစ်ပါသည်။
လူတိုင်းအကျံုးဝင်ပညာရေးသည် မသန်စွမ်းသူများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၊ အိမ်မဲ့ယာမဲ့ များ၊ HIV/AIDS ရောဂါဝေဒနာရှင်များနှင့် အခြားသူများအပါအဝင်၊ ကွဲပြားခြားနားချက်များ ရှိနေသူ အမျိုးမျိုးဧ။် လိုအပ်ချက်များကိုရှာဖွေကာ တုန့်ပြန်သင်ကြားပေးနိုင်သော လူတိုင်း အတွက် ပညာရေး မူဘောင်အတွင်းမှ ပညာရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ (UNESCO 2000)။
လူတိုင်းအကျံုးဝင်ပညာရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ခိုင်လုံသော အထောက်အထားနှင့် သုတေသန စာတမ်းများသည် လက်ရှိတွင် လွန်စွာနည်းပါးနေပါသည်။
ဤသုတေသနတွင် ဖြေဆိုသူပေါင်း(၂၀၀)ကျော် ရှိပါသည်။ သူတို့သည် မသန်စွမ်းကလေး မိဘများ၊ကျောင်းနေနှင့် ကျောင်းမနေသော မသန်စွမ်းကလေးများ၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးများ၊ အထူး ကျောင်းမှ ဆရာများ၊ ပြင်ပပုဂ္ဂလိကမှ ကျောင်းဆရာများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းမှ ဆရာ/ဆရာမများပါဝင်ကြပါသည်။
ဤသုတေသနမှ လူတိုင်းအကျံုးဝင် ပညာရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေမှု အလွန်အားနည်း နေသေးကြောင်း တွေ့ရှိထားပါသည်။ သို့သော်လည်း အချို့မသန်စွမ်း ကျောင်းများတွင် မသန်စွမ်းကလေးများအတွက် လိုအပ်သော အကူအညီ ပြင်ဆင်မှုများကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ် နေကြ၊ ကျင့်သုံးနေကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
ဤသုတေသနမှ လူတိုင်းအကျံုးဝင် ပညာရေးစနစ် အောင်မြင်စွာ ကျင့်သုံးလာနိုင်ရေးအတွက် တစ်နည်းအားဖြင့် ကလေးအားလုံး စာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ကျော်လွှားရမည့် အတား အဆီးများကို ထုတ်ဖော်ပေးထားပါသည်။ ယင်းတို့မှာ မိသားစုဝင်များ၊ ဘဝတူမသန်စွမ်း ကလေးများ၊ ဆရာ/ ဆရာမများဧ။်ပ့ံပိုးမှုများ၊ ကျောင်းဝင်ခွင့်နှင့် စာမေးပွဲစနစ်များ၊ မသန်စွမ်းမှု စမ်းသပ်နည်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာများ၊ အရင်းအမြစ်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများ၊ အသိပညာပေးခြင်း ဆိုင်ရာများ ပါဝင်ပါသည်။
လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး သုတေသနအား Download ပြုလုပ်ရန်
မြန်မာဘာသာ (အကယ်၍ မြန်မာဗားရှင်းအတွက် Font လိုခဲ့လျှင် ဒီနေရာကို နှိပ်၍ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။)
အသံ Version ကို ပြုလုပ်ဆဲဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်တင်တင်ခိုင် (လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးစီမံကိန်း မန်နေဂျာ)
[email protected] ထံသို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
Copyright © 2019 Eden Centre for Disabled Children. All Rights Reserved. | Donated by